Kolombia: Mpanao Gazety Voaraoka Fa Namoaka Lahatsoratra Momba Ilay Orinasan-Tsolika · Global Voices teny Malagasy
Kolombia: Mpanao Gazety Voaraoka Fa Namoaka Lahatsoratra Momba Ilay Orinasan-Tsolika	Voadika ny 30 Oktobra 2012 4:48 GMT
Zarao: Noroahana ilay mpanao gazety Kolombiana Daniel Pardo tao amin'ny habatsera [tranokala] Kien&Ke [es] raha namoaka lahatsoratra [es] momba ny teritery ataon'ny Orinasa Kanadiana mpitrandraka solika, Pacific Rubiales tamin'ny fampahalalam-baovao tahaka ny W Radio [es].
(Nivoaka [es] tao amin'ny bilaogy manokana Pardo) ihany koa ilay lahatsoratra, manontany ny amin'ny hafetsena ampiasain'ny orinasa Pacific Rubiales izay milaza fa “Amin'ny ankapobeny, raha miseho amin'ny fampahalalam-baovao ny orinasa Pacific, ny fomba tokana tantaraina momba ny orinasa dia ny midera azy na miaro azy”, ary nilaza ihany koa izy fa nandoa vola an-tsokosoko amin'ny famoahana vaovao-dokambarotra aseho tahaka ny fampahalalam-baovao ny orinasa Pacific.
Tamin'ny 22 Oktobra, Kien&Ke namoaka tatitra fanamarihana fohy [es] momba ny fanapaha-kevitra handroaka ilay mpanao gazety, izay nilaza fa nangataka tamin'i Pardo izy mba hanome “porofo voarakitra an-taratasy”. Hoy ny fanambarana manazava: “Nanambara ny talen'ny famoaham-baovao, María Elvira Bonilla, fa maika dia maika ny fandefasana ny porofo. Tsy nandefa porofo anefa i Daniel Pardo, ka tsy nandray azy hiasa tao intsony ny gazetiboky Kien&Ke.”
Mpanao gazety Daniel Pardo hita ao amin'ny Kien&Ke
Nitanisa an'i Héctor Mario Rodríguez (tompon'ny habaka internet Primera Página [es] sy ny loharanom-baovao notanisain'i Pardo tao amin'ny lahatsorany) ny fanamarihana avy amin'ny Kien&Ke, izay mifanohitra amin'ny voalaza ao amin'ny lahatsorany. Mifanohitra amin'izany anefa, nanamafy ny vaovao tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'ny Blu Radio [es] i Héctor Mario Rodríguez ary nilaza fa marina tanteraka izay voalazan'i Daniel Pardo tao amin'ny lahatsorany
Vokatr'izany, maro ny mino fa fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tsotra izao fotsiny ny fandroahana azy. Naneho hevitra marobe ireo mpiserasera tao amin'ny Twitter, ka nalaza tao amin'ny Twitter i Daniel Pardo, [es] Kien&Ke, [es] ary ny orinasa Pacific Rubiales.
Julio Ivan Bedoya‏ (@julioivanb) [es], tahaka ny hafa, niantso an'i Julio Sánchez ao amin'ny W Radio hanao fanambarana:
@julioivanb: @WRadioColombia @BluradioCo Nisy olona nanonona ny anaran'i Julio Sánchez momba ny tranga mahazo an'i Daniel Pardo, andro faha-efatra izao ary mbola tsy nisy fanambarana avy amin'i Julio
Mpanao gazety Claudia López (@CLOPEZanalista) [es] nanome tsiny ny fomba fanaovan'ity orinasa [Pacific] ity dokambarotra:
@CLOPEZanalista: Tsy manao dokambarotra amin'ny ara-dalàna ny orinasa tahaka an'i Pacific Rubiales. Fampielezan-kevitra no avoakan'izy ireo, izany hoe, vaovao-dokambarotra feno lainga no avoakan'izy ireo.
Mpisera Twitter Leo (‏@Pata_Leo) [es] nitsikera ny fampahalalam-baovao:
@Pata_Leo: Ary izao koa, mody tezitra ny fampahalalam-baovao miresaka momba ny “fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety” sy ny “fahalalahana haneho hevitra”. Manomboka ao an-tokantrano ny fanaovana ohatra.
Nampiaka-peo ihany koa ny bilaogy sy ny fampahalalam-baovao hafa. Nitatitra La Silla Vacía [es] fa ny orinasa izay mitantana ny dokambarotr'i Pacific Rubiales dia nangataka azy ireo mba hividy tantara tsara momba ny orinasa mpitrandraka solika sy ny andraikitra ara-tsosialy. Namoaka tabilao fanaraha-maso ihany koa La Silla Vacía mikasika ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao momba ny Pacific Rubiales tao anatin'izay telo taona lasa izay ary mampiseho ireo paikady ampiasainy amin'ny dokambarotra.
Nandritra izany, bilaogy hafa nanohy nanohana ilay mpanao gazety ary namoaka indray ny lahatsorany [es] tamin'ny sehatra virtoaly.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraLully
Tantaran'ny Amerika Latina farany 14 ora izayBoliviaAnkizivavy vs. Andriambavilanitra: Voaisa Ny Andron'ny Jadona Mavokely
Fahalalahàna mitenyMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoaka